Okwu M Onu M Bilie | Martech Zone
Site n'ike mmụọ nsọ nke a site na GL Hoffman, nke a bụ okwu isii nke blọọgụ m maliteghachi:
Na-achọta azịza na-enweghị ike. Na ịkekọrịta ha.
Tags: gl hoffmanHoffmanmalitegharịaokwu isiiokwu isii malitegharịa
Nchebe nke Atụrụ?
Dec 30, 2008 na 3:38 PM
Idozi nsogbu ndi nwere nsogbu kariri nke oma.
Dec 30, 2008 na 5:20 PM
Ọrụ rie. Mepụta iji dịrị ndụ.
Dec 30, 2008 na 5:54 PM
Ezigbo onye Douglas!
Ọzọkwa, ndị enyi gị Andrew na Robby, kwa. Jide n'aka na biputere njikọta azụ http://www.whatwoulddadsay.com ya mere anyị niile nwere ike ịhụ okwu isii ahụ malitegharịa. Daalụ ụmụ okorobịa.
Dec 30, 2008 na 6:07 PM
Lee Douglas KarrOkwu isii kwụrụ ọzọ. 🙂
Nwụli! Mmiri dị na ọdọ mmiri ahụ!
Ajụrụ m onye bụbu onye mụ na ya na-arụ ọrụ ka o deere m akwụkwọ m ga-eji nye ya nkwado, ma akpaaka ya bụ, "Amy na-adị ndụ ịmụ ihe, ma mụta imepụta ihe." Edere m okwu mmalite a ka onye ọ bụla ghara iche na m zuru okwu isii magburu onwe ya Andrew =)
Okwu m isii ga - amaliteghachi bụ "Ndụ iji mụta ihe, mụta imepụta ihe."
M na-eme ka ihe na-agaghị ekwe omume dị ka ihe na-enweghị isi